२०७५ भदौ १६ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ अभियान शुभारम्भ
महेन्द्रनगर, धनुषा, १५ भदौ/ प्रदेश नं २ मा सञ्चालित ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानको आज शुभारम्भ भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरे । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सभामुख, प्रदेशसभा सदस्यसहितको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र समग्र विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस खालका अभियान कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । सार्वजनिक बिदा प्रदेश सरकारले कृष्णाष्टमी पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृष्णाष्टमीका अवसरमा भदौ १७ गते आइतवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर दुई गापाबीच विवाद
प्रस, सेढवा, १५ भदौ/ सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर जीराभवानी र पटेर्वा सुगौली गापाबीच विवाद भएको छ । दुवै गापाबीच रहेको भलुवही खोलाको टेन्डरको विषयमा विवाद शुरु भएको हो । पटेर्वासुगौलीले भलुवही खोला आप्mनो सीमामा पर्ने भन्दै साउन २७ गते नदीजन्य पदार्थको खुला टेन्डर आह्वान गरेको थियो भने सोही खोलालाई आप्mनो भन्दै जीराभवानीले भदौ १ गते टेन्डर आह्वान गरेको छ । पटेर्वा सुगौली गापाकी उपप्रमुख ममता महतोले स्थानीय तहको संरचना कायम हुँदा पटेर्वासुगौली गापामा जीरा भवानी गापाको ३, ४, ५ समावेश भएको दाबी गरिन् । उनले राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार भलुवही खोलाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पटेर्वासुगौली गापामा परेकोले आप्mनो गापाले टेन्डर गरेको प्रस्ट्याइन् । तर जीराभवानी गापाका प्रमुख रामप्रीत महतोले जीराभवानी गापामा परेको खोलाको टेन्डरमा अरूको अधिकार नभएको दाबी गरे । उनले अधिकारको लागि गापाले अदालतमा मुद्दा गरिसकेको बताए ।
डा. रमेश मिश्र आयुर्वेद विश्वको प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो र यसको सम्बन्ध प्रत्यक्षरूपमा मानवको जीवनसँग हुन्छ । आयुर्वेद एउटा जीवन विज्ञान हो । यो अनुभव, अनुसन्धानमा आधारित तथा कालानुसार विकसित स्वास्थ्य रक्षा एवं उपचारको प्राचीन पद्धति हो । आयुर्वेदमा शरीर, इन्द्रिय, मन र आत्माको संयोगबाट निर्मित मानव स्वास्थ्यको व्यक्तिगत आधारमा संरक्षण र रोगहरूको उपचारमा विशेष बल दिइएको हुन्छ । मानव जीवनको सबै अवस्थालाई बुझ्दै रोग निदान र चिकित्साको ध्यान राख्दै आयुर्वेदमा उपचार गरिन्छ । स्वास्थ्य र जीवन शैली उन्नत राख्न दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं सद्वृत्तको उपदेश गरिएको छ । दीर्घायु प्राप्तिको लागि स्वस्थ जीवन शैली आवश्यक छ, जुन व्यक्ति विशेषको प्रकृति अनुसार हुन्छ । यसैले गर्दा आयुर्वेदमा व्यक्तिविशेषको प्रकृति अनुसार खानपान र उपचारको व्यवस्था फरक फरक हुन्छ । आयुर्वेदमा मुख्यतया तीन प्रकारको चिकित्सा गरिन्छ । दैवत्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय एवं सŒवावजय । आयुर्वेदमा रोगी एवं रोगको परीक्षाको विस्तृत वर्णन गरिएको छ । रोग एवं रोगीको देशकाल, बल आदिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा निर्धारण गरिन्छ । निदान प
सञ्जय मित्र विभिन्न गणना र अनुमानसमेत होला, करिब ५२४५ वर्षपहिले भारतको वर्तमान उत्तर प्रदेशमा कृष्णको जन्म भएको मानिन्छ । कृष्णको जन्म जेलमा भएको थियो । जन्मदेखि नै चमत्कारमाथि चमत्कारको कथा फैलिएका छन् । चामत्कारिक कथाहरूले गर्दा नै कृष्णको प्रसिद्धि फैलिएको छ र फैलिंदै गएको छ अद्यपर्यन्त। भनिन्छ कृष्ण जन्मने बेलामा जेलका सबै कर्मचारी निदाएका थिए, जेलको ढोका आफैं खुल्यो । जेलबाट उनका पिता वसुदेवले एउटा छैंटीमा हालेर यमुना नदी तर्न खोज्दा बाढी आएको थियो । कृष्णले खुट्टाले पानी छोइदिंदा पानी घट्यो । गोकुलबाट मथुरा पुगे कृष्ण र त्यहाँ जन्मेकी बालिकालाई लिएर वसुदेव फेरि जेल फर्किए । कृष्णलाई मार्न तत्कालीन राक्षस र दानव जातिका विभिन्न योद्धाहरू खटाइए तर तिनलाई कृष्णले मारे । बाल्यकालमा दही र खुवा चोरेर खाए । बाल्यकालमा माटो पनि खाए । आमालाई मुख बाएर ब्रह्माण्ड नै आफ्नो मुखभित्र अटाएको देखाए । गाई चराए । विपन्नलाई सहयोग गरे । आवश्यक पर्दा पहाड नै उचाले । ११ वर्षको उमेरसम्म राधासित नजीक बसे । राधाले मुरलीको प्रशंसा गर्थिन् । कृष्ण र राधाको बालमित्रताको प्रेमको रूपमा यति धे
मिथिलाञ्चलमा तन्त्र – एक चर्चा
डा. बासुदेवलाल दास, पीएच.डी. सहप्राध्यापक, इतिहास विभाग ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगंज मिथिलाञ्चलको भूभागमा तन्त्रको प्रचार प्राचीनकालदेखि नै भएको थियो । तन्त्र भनेको आध्यात्मिक ज्ञान र उपासना पद्धतिको एउटा प्रणाली हो, जसमा खास गरेर शक्तिको उपासनामा ध्यान केन्द्रित गरिएको हुन्छ । तन्त्रशास्त्रका विशाल भण्डार छन् एवम् यसका आयामहरू पनि अत्यन्त व्यापक रहेका छन् । तन्त्रलाई शिव–प्रणीत भनिन्छ । मिथिलामा शिव र शक्तिको धार्मिक प्राधान्य पूर्वकालदेखि नै स्थापित रहेको देखिन्छ । भगवान् शिवलाई आशुतोष भनिन्छ । मिथिलामा सबै वर्गका मानिस शिव र शक्तिको पूजा गर्दछन् । स्मृतिशास्त्र अनुसार शिवतŒवको ज्ञान प्राप्त गर्न शक्तिको उपासना आवश्यक मानिएको छ । श्रुतिशास्त्रको कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड र ब्रह्मकाण्ड गरी तीन विभाग मानिएको छ । यीमध्ये कर्मकाण्डका प्रवत्र्तक जैमिनी थिए, जसको विचारलाई पूर्वमीमांसा पनि भनिन्छ । अर्को उपासनाकाण्डका प्रवत्र्तक नारदलाई मानिएको छ । ब्रह्मकाण्डका प्रवत्र्तक ब्रह्मसूत्रकारलाई मानिन्छ, जसका विचारलाई उत्तरमीमांसा भनेर व्याख्या गरिएको छ । आगमशास्त्रका पक्षधरले उपासना
नियतमै खोट भए भावनामा चोट लाग्छ
वैद्यनाथ ठाकुर १ अगस्तको बिहान हामी ३६ जना शिक्ष्Fक र तिनका सात परिवार बिहान ९ बजे अमृतसरको लागि जमुई कटराबाट स्वराज सुपर एक्सप्रेस चढेर अमृतसरको लागि प्रस्थान ग¥यौं । कारणवश चार/पाँचजना साथी स्टेशन पुग्दा गाडी खुलिसकेको थियो । हतारमा उनीहरू एसी बग्गीमा चढ्न प’गे । उतिखेरै टिटी आएर जनही रु १ सय जरिवाना ठोकिहाल्यो । जेहोस् साँझतिर हामी अमृतसर पुग्दा पानी पर्दैथियो । रुझ्दै हामी गन्तव्यतिर लाग्यौं । अमृतसर स्वर्ण मन्दिरको पश्चिमतिरको गुरुद्वारामा हामीले वास पायौं । राति नै मन्दिर अवलोकन ग¥यौं । पानीको बीचमा बनेको स्वर्ण मन्दिर साँच्चीकै सुनको प्रतीत हुन्थ्यो । बडो आकर्षक र सुन्दर, सफा, शान्त वातावरण त्यहाँ व्याप्त थियो । हामीले केही भिडियो पनि गर्न भ्यायौं । भोलिपल्ट दिउँसो ६ जना साथी मन्दिरमा जाँदा बाहिर राखेको चप्पल चोरी भयो र उहाँहरू आफतमा पर्नुभयो । एक त यात्रा, अर्को नयाँ चप्पल चोरी हुनु त्यो पनि सरदारजीहरूको स्वर्ण मन्दिरमा । आखिर चोर कहाँ छैन । साँझ हामी बाघा बोर्डर पु¥यौं । यहाँ भारतीय सैनिक र पाकिस्तानी सैनिकको परेड हुँदो रहेछ । यसको प्रस्तुति निकै आकर्षक थियो । एक अर्काप्
घरेलु मदिराको समस्या
घरेलु मदिरा उत्पादनको क्रम पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लामा रोकिएको छैन । घरेलु मदिराका कारण बर्सेनि थुप्रै मानिसको अकाल मृत्यु हुने गरेको छ । सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई अहिलेसम्म इजाजत नदिएको कारण यो उत्पादन अवैध भनिएको हो । मदिरा उत्पादनका लागि आवश्यक मापदण्ड घरेलु मदिरा उत्पादकहरूले पूरा गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण घरेलु मदिरा उत्पादकले इजाजत लिएका छैनन् भने सरकारले यसलाई वैधता पनि दिएको छैन । तर पनि देशभर अवैधरूपमा भएपनि घरेलु मदिराको उत्पादन भइरहेको छ । सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको मदिरा सबै तहका मानिसले सेवन गर्न सक्ने हैसियत बनि नसकेको तर दैनिक मदिरा सेवनको बानी बसेको एउटा समूहले गर्दा हाम्रो समाजमा घरेलु मदिरा टिकिराखेको हो । भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको नेपाली सीमावर्ती क्षेत्र पर्सा, बारा, रौतहटलगायतमा अहिले घरेलु मदिरा उत्पादन बढ्नुको कारण बिहारमा मदिरा निषेध हुनाले पनि हो । अहिले सीमासँग जोडिएको भारतको बिहार राज्यमा मदिरा निषेध भएको अवस्था छ । उनीहरू मदिरा सेवनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । यसरी मदिरा सेवनकर्ता एक्कासि बढेपछि यस व्यवसायमा आकर्ष
२०७५ भदौ १५ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
ठाकुरराम क्याम्पसको सभाहलमा तोडफोड
प्रस, वीरगंज, १४ भदौ/ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको सभाहलमा तोडफोड भएको छ । नेकपा सम्बद्ध अखिलले लेखा र स्टोरमा लगाएको तालाबन्दी र उनीहरूले उठाएका मागबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा अखिलका विद्यार्थीहरूले सभाहलको फर्निचर तोडफोड गरेको क्याम्पस प्रशासनले जानकारी गराएको छ । सहायक क्याम्पस प्रमुख रोशन लामिछानेले अखिलले लगाएको तालाबन्दी अन्य विद्यार्थीहरूले तोडेको र सो सम्बन्धमा विवाद सुल्झाउन क्याम्पस प्रशासनले आज अखिलका विद्यार्थी नेताहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएकोमा आक्रोशमा आएर तोडफोड गरी पुनः तालाबन्दी गरेको बताए । उनले क्याम्पस प्रमुख डा. प्रमोद कुशवाहाले समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्ने उद्देश्यले डाकेको बैठकमा अखिलका विद्यार्थी नेताहरूले क्याम्पस प्रशासनले अन्य विद्यार्थीसँग सहकार्य गरेर ताला तोड्न लगाएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले कुर्सी प्रहार गरेको बताए । अखिलका केन्द्रीय सदस्य प्रभाकर गुप्ताले एक महीनादेखि क्याम्पसबारे ज्ञापन दिएको तर माग सम्बोधन नगरिएको र त्यसको आक्रोशमा भदौ ६ गते गरिएको तालाबन्दी क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थीहरूलाई उक्साएर तोड्न लगाएको बताए । उ
रक्सौल र बरौनी डिपोबाट तेल ढुवानी गर्ने २५० वटा ट्याङ्करमा लक–सिस्टम जडान
प्रस, परवानीपुर, १४ भदौ/ नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कार्पोरेशन लिमिटेडको संयुक्त प्रयासमा वीरगंज नाका भएर इन्धन ढुवानी गर्ने २५० वटा ट्यांकरमा लक प्रणाली लागू गरिएको छ । निगमको क्षेत्रीय डिपो अमलेखगंजका प्रमुख प्रदीप यादवका अनुसार रक्सौल डिपोबाट चल्ने १०० वटा र बरौनीबाट चल्ने १५० गरी जम्मा २५० वटा ट्यांकरमा लक प्रणाली लागू भइसकेको छ । यही साउन १ गतेदेखि सरकारको देशव्यापी निर्देशन अनुसार ढुवानी व्यवसायीमार्फत नै म्याग्नेटिक ताल्चा जडान गरी यो प्राणली कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । यसले गर्दा बाटोमा इन्धन चुहावट हटाउने सरकारी लक्ष्य छ । इन्धन लोड गरिएको ट्यांकरमा जडान ताल्चाको दुईवटा साँचो हुन्छ । एउटा नेपाल आयल निगमसँग र अर्को भारतीय आयल कर्पोरेशनसँग । बाटोमा कसैले इन्धन चोर्न प्रयत्न ग¥यो भने ताल्चा तोड्नुपर्छ । विगतमा यस्तै चुहावट हुँदै आएकोले अब बाटोमा तेल चोर्न नसकिने प्रणाली विकास गरी जडान भएको हो।
इ. गोपाल श्रेष्ठ वर्षायाममा हामी सधै त्रसित हुन्छौं । कारण वर्षायामले वर्षाको साथसाथै त्रास र दुःखपीडा पनि बोकेर ल्याएको हुन्छ । वि.सं. २०७० सालमा भारतको केदारनाथ क्षेत्रमा ७० हजारभन्दा बढी नै तीर्थयात्रुहरू अलपत्र परे जसलाई भारत सरकारले ३६ वटा जहाज प्रयोग गरी उद्धार गर्नुपरेको थियो । साथै यता हाम्रो महाकाली नदीले पनि दार्चुलाको खलङ्गामा ५३ वटा घर बगाएर लगेको थियो भने सुदूरपश्चिमको ६ जिल्ला–दार्चुला, डडेलधुरा, कैलाली कञ्चनपुर, बझाङ र बैतडीमा ७०० परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएका थिए । त्यस्तै वि.सं. २०६९ साल वैशाख महिनामा कास्की जिल्लाको सेती नदीमा आएको बाढी पनि त्रासदीपूर्ण नै थियो । यसले खारापानी बजार पूरै बगाएर लगेको थियो । वि.सं. २०७० मा सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा गाविसमा जुरेको पहिरोको त्रासदी त झन् कुरा गरेर साध्य छैन । उक्त पहिरोमा परेर १५६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने ४३६ जना भन्दा बढी सङ्ख्यामा विस्थापित भएको थियो अनि ७३ घर पुरिएको थियो । पहिरोले सुनकोशी नदी थुनिएपछि ७ जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध भएका थिए र ६७ मेगावट विद्युत् उत्पादनमा असर परेको थियो । वि.सं. २०७१ सा
शीतल महतो यतिखेर नेपालको व्यापारघाटा रु ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा रु ९ खर्ब ११ अर्ब २६ करोड व्यापार घाटा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४९–०५० मा रु २२ अर्बको व्यापार घाटा रहेकोमा २५ वर्षको अवधिमा यो करिब ५३ गुणाले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा रु ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड पुगेको तथ्याङ्क छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार १ सय ५५ भन्दा बढी राष्ट्रमा विस्तार भएपनि १ सय २८ मुलुकसँग व्यापारघाटा रहेको तथ्याङ्क छ । नाफा भएका भनिएका मुलुकसँगको व्यापार पनि उत्साहजनक नभई प्रायः नगण्य छ । नेपालको व्यापार सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतसँग हुने गर्छ । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा रु ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा २६.३१ प्रतिशतले आयात वृद्धि हुँदा निर्यात केवल ११ दशमलव १७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार रु १३ खर्ब २४ अर्बमध्ये रु १२ खर्ब ४३ अर्ब आयात भएको थियो । सो अवधिमा रु ८१ अर्बको मात्र निर्यात भएको अवस्था छ । यसरी आया
कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व
विश्वराज अधिकारी करसम्बन्धी अवधारणा नौलो होइन । सभ्यता विकासको क्रममा जब राज्य निर्माण र सञ्चालनको परिपाटी (व्यवस्था) प्रारम्भ भयो, त्यसै बेलादेखि कर लिने प्रावधानको सूत्रपात भएको हो । कुनै पनि राज्य सञ्चालन गर्न कोषको आवश्यकता स्वाभाविक थियो र कोषको सृजना गर्न राज्यले आम्दानी गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुन्थ्यो । अर्कोतिर राज्यले आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत नै कर थियो, अर्को कुनै स्रोत थिएन । परापूर्व कालमा राज्य भनेको राजाको अधीनमा हुन्थ्यो र राज्यहरूले व्यापार गर्थेनन् । प्राचीनकालदेखि नै राज्यको लागि एउटा राष्ट्रिय कोष निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । मुख्यतः युद्धको समयमा राज्यलाई ठूलो कोषको आवश्यकता हुन्थ्यो, किनभने लामो समयसम्म चल्ने युद्धमा सैनिकहरूको भरण–पोषण, हात–हतियार, गोला बारुद, तोप–बन्दुक, गोलीगठ्ठा आदि खरीद गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसरी युद्धका लागि चाहिने ठूलो खर्च जुटाउन राज्यले एकातिर कर लिनै पर्ने अनिवार्यता थियो भने अर्कोतिर युद्ध खर्चिलो हुँदै गएमा राज्यले बाध्य भएर करको दर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसैगरी राष्ट्रहरूले
राष्ट्र विकासको निम्ति दृढ इच्छा शक्तिको खाँचो
श्रीमन्नारायण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा दिएका छन् । यस नाराको कार्यान्वयनको निम्ति अथक प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि देशको विकासको निम्ति देशको नेतामा भिजन हुनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका महŒवाकाङ्क्षी नाराले कति वर्षमा मूर्तरूप ग्रहण गर्ला ? त्यसको कुनै समय अथवा अवधि तोकिएको छैन, तर यदि उनले नेपालको विकासको निम्ति एउटा भिजन नै अघि सारेका हुन् भने त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ । यस भिजनलाई धरातलमा उतार्न मितव्ययितता, सुशासन, इमानदारी एवं पारदर्शिता चाहिन्छ । हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत एवं चीनले गरेको आर्थिक प्रगति तथा विश्वका कतिपय देशहरूले कम समयमा हासिल गरेको आर्थिक प्रगति पनि हाम्रो निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ । हुनत वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू एवं स्वयं प्रधानमन्त्री पनि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्यहरू विगतमा पनि मन्त्री भइसकेका छन् । तर खासै उल्लेख्य काम गरेका उदाहारण भने छैनन् । वर्तमान सरकारसित दुईतिहाई बहुमत रहेको छ । तसर्थ
वैचारिक गरीबीले आक्रान्त
अहिले कुनै पनि समाचारपत्र उठाउनुस्, कुनै टिभी च्यानल हेर्नुस्, कुनै रेडियो–एफएम सुन्नुस्–प्रायः सडक बनेन, बनेको पनि भत्क्यो, पुल बनेको धस्यो, निर्माण काम छाडेर ठेकेदार भाग्योस सिंचाइको लागि बन्न लागेको कुलो बजेटमा नपारिंदा संरचना भत्कन थाल्यो, कुलोमा माटो पुरिन थाल्यो यस्तैयस्तै समाचार बग्रेल्ती भेटिन्छ । हो पनि, अहिले वर्षात् भएकोले सबैभन्दा कठिन बाटोघाटोले पारेको हुन्छ । हामीकहाँ यसै पनि पर्याप्त बाटो छैन, भएको बाटो अधिकांश कच्ची छ, ग्राभल भएको बाटोमा असरल्ल यातायातका साधन गुडेर खाल्डाखुल्डी परेको छ, त्यसमा पानी भरिएर हिंड्न जोखिमपूर्ण बनेको छ । पक्की बाटो पनि राम्ररी मापदण्ड अनुसार नबनाइएको हुँदा, बिग्रेकै बढी देखिन्छ, पुल र बाटोबीच सम्बन्धविच्छेदको अवस्था राजमार्गबाहेक सबै ठाउँमा देखिन्छ । कहीं पुल बनेको छैन, बन्दै गरेको पुल ठेकेदार भागेपछि नैराश्यमात्र उत्पन्न गरेको छ । वर्षात् बितेपछि सडकको कुरा सेलाउँछ । मौसम अनुसार अर्को समस्या आइलाग्छ । जनता नयाँ समस्या लिएर आत्तिन्छ । देश गरीब भएकोले समस्या छ, हुन्छ नै । देश आर्थिक रूपमा मात्र गरीब छैन, वैचारिकरूपमा पनि गरीब छ । साँच्
०७५ भदौ १४ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
मार्चदेखि पाइपबाट तेल आउँछ
प्रस, परवानीपुर, १३ भदौ/ आगामी मार्च मसान्तभित्र नेपालमा पाइपबाट इन्धन भित्रिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । नौ महिना पहिले सञ्चालनमा आएको मोतीहारी–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम लगभग अन्तिम चरण्मा पुग्न लागेको नेपाल आयाल निगम क्षेत्रीय डिपो अमलेखगंजका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए। उनले मोतीहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२ किलोमिटरमध्ये २७ किलोमिटर र नेपाली भूभागमा ३६ किलोमिटरमा १७ किलोमिटर पाइपलाइन ओछ्याइएको जानकारी दिए । यसरी नेपाल भारत गरी दुवैतर्फको करिब ६५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्धारित म्यादको ६ महिनामा ४५ प्रतिशत काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । योजना सम्पन्न गर्न १५ महिनाको समय दिइएको छ । सन् २०१७ डिसेम्बर देखि भारु दुई अर्ब ७५ करोडमा शुरु भएको योजनाको जम्मा लम्बाइ ६८ किलोमिटर छ भने यसको कार्य लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्रले ठेक्का लिएको छ । कुल लगानीको ७५ करोड नेपाल सरकारले बेहोर्ने र दुई अर्ब भारत सरकारले अनुदान दिएको छ । भारत तर्फ रक्सौलभन्दा ५ किलोमिटर दक्षिण सम्म पाइपलाइन ओछ्याइसकिएको छ भने नेपालतर्फ पथलैयादेखि परवानीपुर सम्म अधिकांश ठाउँमा र गण्डकदेखि रजतजयन्
डुङ्गा दुर्घटनाका पाँचजनाको लाश सनाख्त
प्रस, रौतहट, १३ भाद्र । गौर नपा–४ बस्ने भरतराउत कुर्मीकी पत्नी वर्ष ४५ की इन्दुदेवी कुर्मी मृत अवस्थामा फेला परेकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले जनाएको छ । भारतको शिवहर जिल्ला बेलाघाटमा उनको शव फेला परेपछि जिल्ला अस्पाताल गौर ल्याइएको छ । खेतमा घाँस काटी डुङ्गा चढेर घर फर्कन लाग्दा डुङ्गा पुलमा ठोकिन गई दुर्घटना भएको थियो । आज बुधवारसम्म डुङ्गा दुर्घटनामा मर्ने पाँचजनाको लाश सनाखत भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
भतिजीको हत्या आरोप लागेका काका जेल चलान
प्रस, कलैया, १३ भाद्र/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले आप्mनै भतिजीको हत्या गरेको आरोपमा कर्तव्यज्यान मुद्दामा फरार एकजनालाई चार वर्षपछि पक्राउ गरी सजाय भुक्तानका लागि वीरगंज कारागार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराका प्रवक्ता प्रनाउ रञ्जितसिंह राठौरले ०७०/७/१७ गते २१ वर्षीय खुशबुदेवी सहनीको हत्या गरी बरियारपुरको भुतही खोला किनारमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको र सो घटनामा खुशबुको हत्यामा निजका काका महागढीमाई नपा–६ बस्ने रामबलि भन्ने बृजकिशोर सहनी संलग्न रहेको तथा सोही बखतदेखि फरार भएकोले हाल पक्राउ गरेको बताए । प्रवक्ता राठौरले पक्राउ परेको सहनीलाई अदालतमा हाजिर गराई अदालतको आदेशमा पुर्पक्ष्यका लागि वीरगंज कारागार चलान गरिएको बताए ।
को छैन बेपत्ता ?
सन्दर्भ ः बेपत्ताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सञ्जय साह मित्र बेपत्ता हुनु भनेको पत्ता नहुनु हो । जसको अत्तोपत्तो छैन, ती सबै बेपत्ता हुन् । बेपत्ताको यसरी अर्थ लगाइन्न । बेपत्ता भनेको आप्mनो कारणले होइन, अरू कुनै समूह वा राज्यले आप्mनो नीति वा स्वार्थका कारण अर्को पक्षका कोही वा केहीलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिई कतै लुकाउनु हो । जो लुकाइएको हुन्छ, उसका आफन्तलाई राखिएको ठाउँबारे जानकारी हुँदैन । यतिमात्र होइन, बेपत्ता भएको व्यक्तिगत अवस्थाबारे कुनै जानकारी कसैलाई दिइएको हुँदैन । वर्तमान प्रचलित भषामा सामान्यतया बेपत्ता भनेका यसै प्रकारका मानिसहरू हुन् । विगतमा नेपालमा राणाशासनको समयदेखि नै मानिस बेपत्ता हुन थालेको देखिन्छ । तत्कालीन शासनको विरोधमा रहने कैयौं प्रजातन्त्रप्रेमी बेपत्ता भएका थिए । प्रजातन्त्र आएपछि यस्तो खासै सुनिएन । पछि पञ्चायती व्यवस्था हुँदा पनि यही क्रम दोहोरिएको थियो । फेरि प्रजातन्त्र आउँदा कोही बेपत्ता भएन तर जब देशमा तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको शुरुआत ग¥यो, देशमा फेरि बेपत्ता हुने क्रम बढ्यो । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएको अवध
अहिले देशमा लागू नयाँ मुलुकी संहिताको कुरालाई लिएर विभिन्न सरोकार समूह सतर्क हुन थालेका छन् । यो स्वाभाविक हो, सजगताले दुर्घटना हुनबाट रोक्दछ । सजग हुने बानी परेको छ भने कतै कुनै समूह वा वर्गको स्वार्थमाथि थिचोमिचो हुन पाउँदैन । अहिले विशेषगरी सञ्चार क्ष्Fेत्रमा यस ऐनलाई लिएर निकै खैलाबैला मच्चिएको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताका केही दफाहरूलाई लिएर कोकोहोलो मच्चिएको छ । उक्त ऐनको भाग ३–वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसूरमा उल्लिखित प्रतिबन्धहरूबारे सञ्चारजगत्लाई अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ । निश्चय नै मानिसले हिजो जुन सुविधा उपभोग गरिआएको थियो, त्यसमा बन्देज लाग्दा असहज अनुभव हुन्छ । तर हिजोको त्यो बन्देज आजभन्दा डेढ सय वर्ष पहिलेको समाजको रीतिथिति हेरेर बनाइएको थियो । हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा ठूलाले सानाविरुद्ध जे गर्दा पनि हुन्थ्यो त्यसैले तिनका हितमा ऐन थियो । आज देश गणतन्त्रमय भएको छ । आज समान अधिकार उपभोगमा राज्य गतिशील छ । र भन्नुपर्दैन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको क्
२०७५ भदौ १३ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
श्रीसियाँ गाउँका बासिन्दा आइसिपी र सुख्खा बन्दरगाहको चेपमा
प्रस, वीरगंज, १२ भदौ/ नेपाल सरकारको गलत रवैयाको कारण वीरगंज महानगरपालिका–२५ अलौं, श्रीसियाका सयौं बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । आइसिपी र सुक्खा बन्दरगाहबीच रहेको श्रीसिया गाउँका सम्पूर्ण घरजग्गा नेपाल सरकारले रोक्का गरेपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन् । सुक्खा बन्दरगाहदेखि पश्चिम, पद्मरोडदेखि दक्षिण तथा आइसिपी सडकदेखि पूर्वको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना अनुसार नेपाल सरकारले २०७४ माघ २५ गतेदेखि रोक्का राखेको छ । नेपाल सरकारले सो क्ष्Fेत्रको घर जग्गा रोक्का गरेपछि जग्गा बिक्री वितरण वा निर्माण कार्यसँगै बैंकमा पनि कारोबार गर्न नपाउने भएकोले स्थानीयहरू पीडा पोख्न थालेका छन् । ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस निर्णय नगरेको कारण केही व्यक्तिको छोरीको बिहेबारी पनि रोकिएको स्थानीय आशिक अन्सारीले बताएका छन् । बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर जग्गा लिलाम भइरहेको छ । जग्गा फुकुवा भएको भए बिक्री गरेर बैंकको भुक्तानी दिन सकिन्थ्यो । तर अलपत्र परेको अन्सारीले बताए । सो क्ष्Fेत्रमा ६२ बिघा जग्गा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार रोक्का राखेको देखिन्छ । केही स्थानीयको घर जीर्ण भएको
बाटो मरम्मत गर्दै गरेको मेसिन उपकरण निकुञ्जको कब्जामा
प्रस, सेढवा, १२ भदौ/ सुवर्णपुरमा बाटो मरम्मत गरिरहेको मेसिन उपकरण पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको छ । ठोरी गाउँपालिका कार्यालयले वडा नं. ५ सुवर्णपुरमा आप्mनै डोजर, ट्रिपर र ट्याक्टर प्रयोग गरेर सडक मरम्मत गरिरहेको थियो । आज दिउँसो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत गडवालाइन पोस्टबाट खटिगएको सेनाको टोलीले ठूलो बाघमोर्चा गाउँको माझबाट उक्त साधन तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिएको हो । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने खोलाबाट अनुमतिबिना ग्रेभेल निकालेकोले उपकरण नियन्त्रणमा लिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले बताए । घटनाबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त भइ नसकेको उनले बताए । वर्षात्को कारण सडक बिग्रेर पैदल हिंड्ने अवस्थासमेत नरहेकोले आप्mनै स्रोत साधनमा गाउँपालिकाले सडक मरम्मत गर्न थालेको ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले बताए । सडकमा माटो काट्ने र मिलाउने काम भइरहेकोमा केही अति आवश्यक ठाउँको लागि जनसहभागितामा गाउँबीच सडक छेउबाट २/४ टिप ग्राभेल निकालेको अध्यक्ष श्रेष्ठको जिकिर छ । आपत्कालीन अवस्थमा एम्बुलेन्ससमेत चल्न नसक्ने बाट
बिमस्टेक सम्मेलन र हाम्रो अपेक्षा
श्रीमन्नारायण बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा नेपालले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, प्रविधि, भन्सार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ । दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्थापनाको तीन दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि यसले अपेक्षित प्रगति गर्न दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको कारण बिमस्टेकको माध्यमबाट यस क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा रहेको छ । बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलनलाई धेरै अर्थमा महŒवपूर्ण मानिंदैछ । यसबाट हामीलाई धेरै अपेक्षा रहेको छ । सन् १९९७, जून ६ मा ‘थाइल्यान्डको बैंककमा यसको स्थापना भएको थियो । यसमा भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, भूटान, म्यान्मा, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड तथा माल्दिभ्सलगायत सदस्य छन् । हाम्रो देश नेपालले सन् २००४ मा यसकोे सदस्यता लिएको थियो । बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्यान्डमा, दोस्रो सन् २००८ मा तथा तेस्रो सन् २००२ मा म्यान्मामा भएक
विषय छ, शिक्षक छैन
नीति बनाउनुको अर्थ हो त्यसको कार्यान्वयनले देशमा नयाँ दिशाको खोज गर्नु । कुनै नौलो वा पुरानै कामलाई नयाँ ढङ्गले गर्नुछ भने पहिले सोसम्बन्धी नीति बनाइन्छ । यहाँसम्म त नेपाल सरकार सदाकालदेखि तत्पर छ, तर कार्यान्वयन पक्षको कुरा गर्ने हो भने आजसम्म कुनै पनि सरकारले दृढता देखाउन सकेको छैन । हिजोको सरकारलाई अनुत्तरदायी भनियो ठीक छ, सरकार कामजोर छ भनियो ठीक छ, शासन व्यवस्थाको दोष लगाइयो, त्यो पनि ठीक छस तर अहिले त सबै बलियो छ । सरकार उत्तरदायी छ । सरकार बलियो छ । अझ अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले त नेपालको व्यावहारिक शासक–शैलीलाई चुनौती दिंदै सत्ताका लागि कसैको आड नलिने हठ लिएर सफल पनि भए । अनि शासन पद्धति त विश्वकै नौलो छँदैछ । तर पनि नीतिको सामञ्जस्य कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष्Fसँग गर्न सकिएन । सत्ताशीर्षमा बस्नेले पूर्ण अवधि सत्तामा बस्ने र आप्mनो कार्यकालमा केही ठोस काम गर्ने अभिलाषा राखेकै हुन्छ । तर सत्ताशीर्षमा पुगेको व्यक्तिको हात आजसम्म कहिले खाली रहन पाएन । कसैले कुर्सीबाट फालिदेला भनेर दुवै हातले कुर्सी समाउनैमा उसको समय बित्यो । अहिलेको सरकारलाई प्रत्यक्षतः त्यस्तो क
२०७५ भदौ १२ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
निजगढको विकास हेरेर प्रदेशका अन्य ठाउँले ईष्र्या गर्नेछ ः मुख्यमन्त्री राउत
प्रस, निजगढ, ११ भदौ/ निजगढ यस प्रदेशमध्येको महŒवपूर्ण ठाउँ रहेको र यसको विकासको गतिलाई हेरेर प्रदेशभित्रका अन्य ठाउँले ईष्र्या गर्न थाल्ने प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले बताए । निजगढ–६ सडकटोलद्वारा आयोजित महामति श्री प्राणनाथजी प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव कार्यक्रमको आजका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राउतले सोमवार सम्बोधनका क्रममा सो कुरा बताएका हुन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्र्याकको साथै अन्य विकासको गतिले निजगढको विकास तीव्र गतिमा हुने उनले बताए । निजगढको विकास क्रमसँगै बाहिरका मानिसहरूसमेत यहाँ बसोवास गर्न लालायित हुनेसमेत बताए । प्रदेश सरकार सीमित साधन स्रोतका बावजुद निर्माणको क्रममा रहेको उनले भने। यस प्रदेशको विकास धार्मिक पर्यटनबाट हुने बताउँदै यसैबाट मुख्य आम्दानी, आर्कषण हुने आशा व्यक्त गरे। आपूm यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री भए लगत्तै ‘बेटी पढाऔं बेटी बचाऔं’ र पर्यटन विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको उनले बताए । जानकी मन्दिर, जनकपुरको सौन्दर्यीकरणका लागि प्रदेश सरकारबाट साढे पाँच करोडको बजेट आएको बताउँदै आगाम
महिलाको चुनौती, रीतिथिति र परम्परा– सांसद चाँदतारा
प्रस वीरगज,११ भादौ/ वीरगंजबाट प्रकाशित ‘मध्य नेपाल सन्देश’ पत्रिकाले दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोसवको अवसरमा आज सो पत्रिकाले ‘महिला नेतृत्व, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका सांसद शेख चाँदताराले महिला नेतृत्वको मुख्य चुनौती संस्कृति र पुरानो रीतिरिवाज भएको बताइन् । सदीयौदेखि चलिआएको चलन तोड्नु पर्ने भन्दै सांसद चाँदताराले अन्धविश्वास, महिला विरोधी संस्कृति तथा परम्परा तोडेर अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् । संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा महिलाहरूले अवसर पाएको चर्चा गर्दै उनले सरकारी नोकरीमा कोटा निर्धारित गरिएकोले महिलाहरूले अहोभाग्य ठान्नुपर्ने बताइन् । कानूनीरूपमा विकसित मुलुकमा दिइने अधिकार नेपाली महिलाले पाएको भन्दै नेतृ चाँदताराले अझैपनि महिलालाई घर बाहिर पठाउन हच्किने पुरानो सोच परिवार–समाजमा कायमै रहेको बताइन् । डा. सुषमा तिवारी द्विवेदीले ‘महिला नेतृत्व अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माले विगतको